IDome ENTSHA yeSukha, kufutshane nePoas Volcano kunye ne-SJO Airprt
Intente sinombuki zindwendwe onguLuis
Gxila kuluhlaza oluhlaza wendalo kunye nemibono emangalisayo, zithuthele kumava akhethekileyo okuhlala kule dome yobutofotofo ibekwe ngokugqibeleleyo kwimizuzu engama-35 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-SJO kunye nesixeko saseAlajuela, imizuzu emi-5 ukusuka eHacienda Alsacia Starbucks ifama yekofu, kunye nemizuzu kude neLa Paz. IiGadi zeWaterfalls kunye nePoas Volcano.
Le dome ikhethekileyo ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukusuka kwibhedi enkulu ukuya kwiishawa ezishushu, ikhitshi, iterrace nokunye okuninzi.
Ngobude obuziimitha ezi-4 kunye ne-7 yeemitha zobubanzi le dome iphangaleleyo inehombisi epholileyo nebukekayo, ejikelezwe ziintyatyambo kunye nohlaza oluchumileyo oluya kukusa kumava awodwa. Hlala kwi-terraza ukuze ubukele indalo, ucamngce uthe cwaka, ufunde incwadi, uthathe uhambo oluya emlanjeni ngaphakathi kwepropathi, thatha ixesha lakho kwi-symmetry yomlingo kunye namandla ahambelana nedome. Idome ibekwe e "Quinta Esencia" eyinxalenye yepropathi yosapho lwethu, iigadi zabelwana ngazo nezinye iindwendwe.
I-Sukha dome ikwipropathi yaseQuinta Esencia eFraijanes, en "El Retiro" indawo yokuhlala, ijikelezwe ngeembono ezimangalisayo zendalo, izindlu ezintle kakhulu, kunye nemizuzu nje ukusuka kwiindawo zokutyela ezidumileyo ezifana ne "Chubascos" edumileyo.
Siyakuthanda ukwazi iindwendwe zethu, sinomdla wokwazi njengoko oku kusenza sivakalelwe kukuhamba kunye nokufumanisa. Ukubonelela undwendwe lwethu ngayo yonke into enokwenzeka ngexesha labo lilungelo kuthi, kwaye sibancede babe namava amnandi thina oko sijolise kuko. Sidla ngokufumaneka ngokuncokola okanye ngefowuni okanye nanini na kunokwenzeka emzimbeni, kodwa kusenokwenzeka ukuba siya kukuvuyela ukuncedisa ngokuncokola.
Siyakuthanda ukwazi iindwendwe zethu, sinomdla wokwazi njengoko oku kusenza sivakalelwe kukuhamba kunye nokufumanisa. Ukubonelela undwendwe lwethu ngayo yonke into enokwenzeka ngex…